खर्बपति बिल गेट्स दम्पतीले सम्बन्ध वि'च्छेदको गरे घोषणा, छु'ट्टिनुको कारण यस्तो देखाउदै लेखे यस्तो स्टाटस ! -
Homeसमाचारखर्बपति बिल गेट्स दम्पतीले सम्बन्ध वि’च्छेदको गरे घोषणा, छु’ट्टिनुको कारण यस्तो देखाउदै लेखे यस्तो स्टाटस !
May 4, 2021 admin समाचार 194
विश्वकै प्रतिष्ठित कम्पनी मा’इक्रोसफ्टका मालिक तथा विश्वकै धनि व्यक्ति मध्येका एक हुन् बिल गेट्स । उनको ब्या’पारको बारेमा त हामीले थुपै खबरहरु सुन्दै आइरहेका छौं । तर, आज हामी उनको निजी जीवनको बारे’मा चर्चा गर्दैछौं ।
खर्बपति बिल गेट्स दम्प’तीले सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरेको छ । बिल र मेलिन्डा गेट्सले सम्बन्ध विच्छे’दको घोषणा गरेका हुन् । उनीहरुले २७ वर्ष लामो वैवाहिक सम्ब’न्धलाई टुक्रयाउँदै अब संगै बस्न नसक्ने बता’एका हुन् । जोडीले भनेको छ, ‘हामी अब जोडीका रुपमा एक अर्कालाई विश्वास गर्ने अवस्था’मा छैनौं ।’
सामा’जिक संजाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै यो जोडीले लेखेको छ, ‘हाम्रो सम्बन्धको लामो विचार विम’र्शपछि हामीले वैवाहिक सम्बन्ध टुंग्याउने निष्क’र्षमा पुगेका छौं ।’ सन् १९८० को दशकमा पहिलो पटक भेटिएका उनीहरु अन्ततः छुट्टिएका हुन् । असीको दशकमा मे’लिन्डा बिल गेट्सको माइक्रोसफ्ट फर्ममा आ’वद्ध हुन पुगेकी थिइन् ।
उनी’हरुका तीन सन्तान छन् । उनीहरुले संयुक्त रुपमा बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशन चला’उँदै आएका छन् । उनीहरुको वैवाहिक जीवन टुंगिएको भए पनि परो’पकारी काम भने मिलेरै गर्ने पनि जनाएका छन् ।
सन् १९९४ मा विवाह गरेका उनीह’रूका तीन सन्तान छन्। बिल र मेलिन्डाले सा’माजिक कार्य गर्नका लागि बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन पनि बनाएका छन्। सम्बन्ध’विच्छेद भए पनि फाउन्डेसनमा उनीहरूले सँगै काम गर्ने बता’एका हुन्।
कुनै बेला सं’सारकै धनी व्यक्ति रहेका बिल गेट्स अहिले पनि संसारकै चौथो धनी व्यक्ति हुन्। फोर्ब्स म्याग’जिनका अनुसार उनीसँग अहिले १२४ अर्ब अ’मेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति छ। बिल गेट्सले सन् १९७०को दशकमा माइक्रोसफ्ट कम्पनीको स्था’पना गरेका थिए।
बिल गेट्स र मिलि’न्डाको प्रेम – बिल गेट्स लाई नचिन्ने विश्वमा सायदै कोही मानिसहरु छैनन् उनी संसा’रकै धनि व्यति हुन । बिल गेट्स का कुरा हरु सुन्न र उनका जिवनका विषयमा जान्न सबै मानिसहरु उत्सुक हुनेगर्दछन् । सं’सारका धेरै सेलिब्रेटी को प्रेम कहानी ज’स्तै बिल गेट्स र मेलिन्डाको पनि यस्तै रोचक प्रेम कहानी छ । बिल गेट्स ले ठुला –ठुला कार्य गर्न जति परिश्रम गरे त्यति नै उनले आफ्नो प्रेम सफल बनाउन प’रिश्रम गरेका थिए ।
शनि’वारको दिन, पार्किङमा गाडी राखेपछि । गेट्सले मिलिन्डलाई देखे। उनि सोझै मिलिन्डा भएको ठाउा’तिर गए र प्रेम प्रस्ताव राखे तर मिलिनडा ले अ’स्विकार गरनि । कारण गेट्सको प्रस्ताव मिलिन्डालाई ‘त्यो अत्यन्त फितलो प्रस्ताव भयो’ मिलिन्डाले भनिन अलि गहन तरिकाले प्रस्ताव गर । त्यसको दुई सा’तापछि गेट्सले फेरी मिलिन्डालाई प्रस्ताव राखे ।
गेट्सले त्यो बेला मिलि’न्डालाई ‘डिनर अफर’ गरेका थिए । तर त्यो प्रस्ताव पनि मिलि’न्डाले अस्विकार गरिन । फोन नम्बर दिदै भनिन ‘फुर्सद भएको समयमा फोन गर्नु ।’त्यही रात गेट्सले मिलि’न्डालाई फोन गरे। त्यस पछि यि दुवै नजिक हुन थाले । सुरुमा यो प्रेम सम्बन्ध गेट्सकी आमा’लाइ मन परेको थिएन तर लामो समयसम्म भएको प्रेमलाई गे’ट्सकी आमाले केही गर्न सकिनन् । त्यो बेलामा गेट्स र मिलिन्डा एउटै कलेज मा पढ्थे। पटि मिलिन्डा पनि माइक्रो’सफ्टकै प्रोडक्ट म्यानेजर भइन् । यसले यी दुईको सम्ब’न्ध थप बलियो बनायो । इताजा खबरबाट
March 4, 2021 admin समाचार 1638
March 7, 2021 admin समाचार 1641
पूर्व मिस नेपाल शृङ्ख’ला ख’तिवडा विश्वकै चर्चित विश्वविद्याल’य हार्वर्डमा अध्य’यन गर्ने भएकी छन् । अमेरिकाको उक्त विश्वविद्यालयमा उनले अर्बन प्लानिङ अर्थात् स’हरी विकास योजना’मा स्नातको’त्तर गर्न लागेकी हुन् । अध्याय’नका लागि अग’स्ट महिनामा अमेरि’का उड्न
March 16, 2021 admin समाचार 1324